Ishishini & nohambo
Ityala leLaptop yeshishini
Ukuzonwabisa kunye neFashoni
Isikolo kunye noJunior
Ingxowa yepad yokutshintsha komntwana
Imidlalo kunye nezixhobo
Iingxowa ezenziwe ngokutsha
Ubhaka wokuhambisa amanzi
Umboniso weCanton Fair kwi-Intanethi Buyela kwingxowa yesikolo_Magical Sequin, Magical Life
Enkosi umboniso weCanton Fair kwi-Intanethi, singadibana ngexesha elikhethekileyo. Kule vidiyo, sonwabile ukwabelana ngeeNgxowa ze SEQUINS ezintsha zokubuyela esikolweni kunye nani bafana. Njengesiqulatho seengxowa zobungcali, singathanda ukwabelana ngolwazi malunga nezinto ze-SEQUIN, ezinje ngeendidi, iindleko, ukulinganiselwa njl.
Imibala yejeli enemibala kunye nebhegi ka-Rainbow PVC
Ukuhamba okupakishwe ityhubhu
Thanda ukuhamba, thanda ubomi! Ukukhanya kokuhamba ngokuphatha izinto eziyimfuneko kwisithuba esilinganiselweyo sisidingo sethu esisisiseko. Ke ngoko, ukucwangcisa ukupakisha kwethu yikhosi eyimfuneko! Kule vidiyo, singathanda ukwabelana ngetyhubhu yokupakisha yokuhamba. Unganqikazi ukuqhagamshelana nathi ukuba unayo nayiphi na inte ...
Ukuqaqamba kweNkwenkwezi yeminyaka engama-25
Kuluvuyo kakhulu ukuBhiyozela iNkwenkwezi yeminyaka engama-25 ukuza kwi-2020. Ndibabulela bonke abathengi, abasebenzi, abathengisi kunye nabahlobo ekuxhaseni ixesha elide !! Kule vidiyo, asinakulinda ukuba sazise nge-SUPER isibonelelo esikhethekileyo kuye wonke umntu !! Olunye ulwazi, nceda uzive ukhululekile ukuthumela i-imeyile ku- info@tkstar.com ....
I-2020 Canton Fair kwi-Intanethi ye-Intanethi yeNkcazo yeNkwenkwezi
I-Twinkling Star_Magical Mummy Backpack itshintsha ebhedini!
Ngaba unamava abantwana belila kwaye bekhala kodwa udiniwe ukumwola? Ngaba uyafuna ukuba nebhedi yokukhulula izandla zakho xa ungaphandle? Ngaba uyafuna ukukhetha zonke izinto zakho eziyimfuneko xa ungaphandle? Kule vidiyo, singathanda ukwabelana nawe ukuba unjani umlingo wommama wethu ...
Ukuqengqeleka kwenkwenkwezi ye-Star_Dupont kunye ne-Backpack yeShishini
Ucinga njani ngengxowa eyenziwe nge "Phepha"? Ngokwenyani, kukho uhlobo lwezinto ezibizwa ngokuba yiDupont Paper, ekwabizwa ngokuba lilityek. Ijongeka njengephepha, kodwa ayinamanzi kwaye inobuhlobo! Kule vidiyo, sonwabile ukwabelana nawe ngobhaka owenziwe ngezinto zeDupont.
Eyona ndlela ihamba phambili yokuhamba kwindawo yangasese | Ukukhetha ibhegi yezithambiso
Uninzi lwethu lungathanda ukukhetha ukuhamba ngeholide. Ukukhanya kokuhamba ngokuphatha izinto eziyimfuneko kwindawo enomda yimfuneko yethu ephezulu. Ke, uyikhetha njani ibhegi yokupakisha sisihloko esibaluleke kakhulu. Kule vidiyo, kuyakubakho indawo ebanzi, engasindi kwaye efikelelekayo yokuhamba yangasese ebonisa, whic ...
idilesi 238 # Zhitai Road, Qingmeng Economic & Area Industrial Technical, Quanzhou, Fujian, China
Recycled enamavili Shopping Bag, Bags ezase Ilaphu, Recycled Bag , Eco-Friendly Bag , Non olukiweyo Bag , Large Plastic Bag ,